Ichikawa အလုပ်အကိုင်သတင်းအချက်အလက် [Genvers] အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးအလုပ်
Ichikawa အပါအ ၀ င်တစ်နိုင်ငံလုံးရှိအလုပ်နေရာများစာရင်း
Ichikawa စကားလုံးအပါအ ၀ င်အလုပ်ရှာဖွေမှုရလဒ်များ
၎င်းသည် Ichikawa ၏သော့ချက်စာလုံးအားရှာဖွေသည့်အလုပ်၏အလုပ်ခန့်အပ်မှုသတင်းအချက်အလက်စာမျက်နှာဖြစ်သည်။အလုပ်ဒေတာဘေ့စမှ"အီချီကာဝါ"အပါအဝင်အလုပ်စာရင်းများပြသခြင်း။
Ichikawa အပါအ ၀ င်ဆိုက်အလုပ်ရှာဖွေမှုရလဒ်
အခြေအနေ setting ⇒ [Ichikawa]
★ကုမ္ပဏီသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းအတွက် ၀ မ်းမြောက်ဂုဏ်ယူခြင်း★ - ယန်း ၅၀,၀၀၀ ★ [Pavement] Maeda Road Co. , Ltd. ၏နှစ် ဦး နှစ်ဖက်အကျိုးစီးပွားတိုးတက်ရေးပါတီသည်လုပ်ငန်းတည်ငြိမ်စေသည်။ "လုံခြုံမှု"၊ "တည်ငြိမ်မှု" နှင့် "လုံခြုံစိတ်ချရမှု" ကိုဝါကြွားသောလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန်လွယ်ကူသောကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။
■ Maeda Road Co. , Ltd. ၏နှစ် ဦး နှစ်ဖက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောပါတီဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်များစွာသောဆိုဒ်များကိုအနှောင့်အယှက်မရှိအမြဲတမ်းအလုပ်များနေသည်။ထို့ကြောင့်၎င်းသည်တည်ငြိမ်ပြီးဝင်ငွေမြင့်မားမှုသေချာသည့်ဝန်းကျင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အတွေ့အကြုံနည်းပါးသူများသည်လျင်မြန်စွာနှင့်သေချာစွာကြီးထွားနိုင်ပြီးအတွေ့အကြုံရှိသူများသည်သူတို့၏စွမ်းရည်များကိုပိုမိုတိုးတက်စေနိုင်သည်။ပုဂ္ဂလိကခန်းဆောင်တွင်လေအေးပေးစက်တပ်ဆင်ထားပြီးလေယာဉ်အပြည့်တပ်ဆင်ထားပြီးအများသုံးရေချိုးခန်းများတပ်ဆင်ထားသည်။ *“ မော်တော်ယာဉ်အခြေခံဆောက်လုပ်ရေးစက်ယန္တရား” အတွက်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရရှိထားသူများကိုကြိုဆိုပါတယ်။ ★အခုဆိုရင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုယန်း ၅၀၀၀၀ ပေးဆောင်ရမှာပါ။ (* ကျွန်ုပ်တို့၏စည်းမျဉ်းများအရ)
■ကျောက်ခင်းခင်းဆောက်လုပ်ရေး ၀ န်ထမ်းများ
■နေ့စဉ်လစာ / ယန်း ၁၁,၅၀၀ မှ ၁၇၀၀၀ (လစဉ်ယန်း ၃၀၀၀၀၀ မှယန်း ၅၀၀၀၀၀ ဖြစ်နိုင်သည်) * အတွေ့အကြုံနှင့်စွမ်းရည်ကိုစဉ်းစားသုံးသပ်ပါမည်။ * သင်၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုပေါ် မူတည်၍ ငွေပေးချေမှုကိုအချိန်မရွေးတိုးနိုင်သည်။
Kawasaki ရပ်ကွက်၊ Kawasaki City, Kanagawa စီရင်စု
■တိုကျိုကဲ့သို့သောဆင်ခြေဖုံးနေရာများ၊ အဓိကအားဖြင့်ကာရာဆာကီမြို့၊ ကာနာဂါစီရင်စုနယ်။
[အတွေ့အကြုံမရှိသူ] အကယ်၍ သင်ကခံစားမိလျှင်၊ သင်သည်အတွေ့အကြုံမရှိသူမှစတင်လျှင်ပင်ပြproblemနာမရှိပါ။ကျွန်တော်တို့ဟာပြည့်စုံကောင်းမွန်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ကြီးပြင်းလာပါလိမ့်မယ်။ [အတွေ့အကြုံရှိသူများ] သင်၏လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံများကိုအသုံးချခြင်းဖြင့်ဤလုပ်ငန်း၌ "ကျေးဇူးပြုပြီးတက်ကြွသောအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်ရမည်" ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏စွမ်းရည်ကိုအပြည့်အဝပြသနိုင်မည့်ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုပြင်ဆင်ထားသည်။ကျနော်တို့ယခင်အလုပ်၏ကုသမှုနှင့်အတွေ့အကြုံထည့်သွင်းစဉ်းစားအတွက် ဦး စားပေးကုသမှုပေးလိမ့်မည်!သင်၏စွမ်းရည်တိုးတက်လိုလျှင်သို့မဟုတ်ဝင်ငွေပိုမိုရရှိလိုပါကကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။
Teijyu Co. , Ltd.အလုပ်များကြည့်ပါ
[လက်သမားပုံစံ] လက်သမား→သင်ငွေများစွာရနိုင်သည်။အလုပ်သင်→လူတစ် ဦး အတွက်မြှင့်တင်ပါ။ပတ်ဝန်းကျင်သည်အလုပ်လုပ်ရန်လွယ်ကူပြီးသင်သည်အချိန်ကြာမြင့်စွာထိုင်နိုင်သည့်အတွက် ၀ န်ထမ်းများထိန်းသိမ်းထားသောနှုန်းသည်ထူးခြားသည်။
● "လှုံ့ဆော်မှု" "မှတ်မိရန်လှုံ့ဆော်မှု" ... ဒါဟာအရေးအကြီးဆုံးအရာပဲ။သင်၏အတွေ့အကြုံနှင့်စွမ်းရည်အရအလုပ်ကိုသင့်ထံသို့ကျွန်ုပ်တို့ချန်ထားမည်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်သင်ငွေအမြောက်အများ ၀ င ်၍ ကြီးထွားနိုင်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုဖြစ်သည်။သင်အကောင်းဆုံးလုပ်နေသည်ဟုခံစားရပါကအဆင်ပြေပါသည်။
●မှိုလက်သမား (၁) လက်သမား (၂) အလုပ်သင်
●နေ့စဉ်လစာ (၁) လက်မှုပညာရှင် - ယန်း ၁၃၀၀၀ မှ ၁၈၀၀၀ ယန်း (၂) အလုပ်သင် ... ယန်း ၉၀၀၀ ~ Start * အတွေ့အကြုံနှင့်စွမ်းရည်များကိုစဉ်းစားသုံးသပ်ပါမည်။ ...
● Chiba စီရင်စုရှိတိုကျိုနှင့်တိုကျိုရှိနေရာတစ်ခုစီ * တိုက်ရိုက်နှင့်တိုက်ရိုက်ပြန်ပို့လို့ရနိုင်ပါတယ်
Tsukamoto Koken Co. , Ltd.အလုပ်များကြည့်ပါ
Horiuchi Kenso Co. , Ltd.
လှုံ့ဆော်ခံထားရသူများကိုသူတို့အတွေ့အကြုံမများလျှင်ပင်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်။တစ်ပြိုင်နက်တည်းအရောင်းဝန်ထမ်းများစုဆောင်းမှု! * အဆောင်တပ်ဆင်ထားဒေသခံဒေသခံများကြိုဆိုကြသည်! * တိုကျိုအလယ်ပိုင်းတွင်အလုပ်များစွာရှိပြီးကျွန်ုပ်တို့သည်လက်မှုပညာရှင်များကိုရှာဖွေနေသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည်အထူးသဖြင့်တိုဟိုကုဒေသရှိနေထိုင်သူများကိုစောင့်မျှော်နေပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အတွေ့အကြုံမရှိသောလှုံ့ဆော်သူများကိုကူညီသည်။ [အရည်အချင်းထောက်ခံမှုစနစ်] ရှိသောကြောင့်သင်နားမလည်သည့်တိုင်အောင်တက်ကြွသောအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်နိုင်သည်။သင်ကအတွေ့အကြုံနည်းရင်တောင်အရည်အချင်းပြည့်မီအောင်စပါစို့။သင်၌မေးခွန်းများရှိပါကအကြီးတန်း ၀ န်ထမ်းများအားအမြဲမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။အဆောင်သည်အပြည့်အဝတပ်ဆင်ထားသဖြင့်အဝေးမှလူများပင်အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ * လုပ်ငန်းတာ ၀ န်ခံ / ကန်ထရိုက်တာခန့်အပ်မှုအောက်တွင်
ဗိသုကာပန်းချီဆရာ / အရောင်းဝန်ထမ်း
(၁) ဗိသုကာပန်းချီဆရာအတွေ့အကြုံမရှိသူတစ် ဦး နေ့စဉ်လစာ ၁၀,၀၀၀ ယန်း ~ (* စမ်းသပ်ကာလ ၂ လနေ့စဉ်လစာ ၈၀၀၀ ယန်း ~) အတွေ့အကြုံရှိသူနေ့စဉ်လစာ ၁၆၀၀၀ ယန်း ~ * * ...
အဓိကအားဖြင့် Funabashi မြို့၊ Chiba စီရင်စု၊ Ichikawa၊ Matsudo၊ Kashiwa စသည်တို့ဖြစ်သည်။ * ဒေသခံများအထူးသဖြင့်တိုကူဒေသရှိဒေသခံများအားကြိုဆိုသည်။
Horiuchi Kenso Co. , Ltd.အလုပ်များကြည့်ပါ
Ichikawa Giken Kogyo Co. , Ltd.
အလုပ်တွေအများကြီးနဲ့လက်မှုပညာရှင်များကိုချက်ချင်းစုဆောင်းမှုတွေရှိတယ်။အတွေ့အကြုံရှိသူ ဦး စားပေးကုသမှု!အတွေ့အကြုံမရှိသေးတဲ့လူတွေတောင်မှအိုကေပါတယ်။
အတွေ့အကြုံမရှိသူများ၊ နူးညံ့သိမ်မွေ့။ ကျွမ်းကျင်သောလက်မှုပညာရှင်များ (အမျိုးသားအရည်အချင်းပြည့်မီသူများ၊ နှစ်ပေါင်း ၃၀ မှ ၅၀ နှစ်ကျော်အတွေ့အကြုံရှိသူများ) သည်သင့်အားကြင်နာစွာနှင့်ယဉ်ကျေးစွာလမ်းပြလိမ့်မည်။၎င်းသည်ဆက်ခံမည့်အရေအတွက်လျော့နည်းလာသောအလုပ်ဖြစ်သည်။သူတို့ရဲ့လက်ထဲမှာအလုပ်ရချင်တဲ့လူငယ်တွေအတွက်!
အတွေ့အကြုံရှိသူနေ့စဉ်လုပ်ခ 16,000 ယန်း ~ (သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအခကြေးငွေပါဝင်သည်) * အတွေ့အကြုံနှင့်စွမ်းရည်ကိုစဉ်းစားပါအလုပ်သင်နေ့စဉ်လုပ်အားခယန်း ၁၁၀၀၀ ~ (သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအခကြေးငွေပါဝင်သည်) စမ်းသပ်ကာလရရှိနိုင် * အတွေ့အကြုံ ...
Ichikawa City၊ Chiba စီရင်စု၊ Matsudo စီးတီး၊ Kashiwa City၊ Funabashi စီးတီးစသည်တို့ကိုဗဟိုပြုသည်။ စီရင်စုရှိနေရာများအားလုံးတိုကျိုနှင့် Saitama စီရင်စု ၂၃ ခုတွင်လည်းအလုပ်များရှိသည်။
Ichikawa Giken Kogyo Co. , Ltd.အလုပ်များကြည့်ပါ
★ Corona အစီအမံသည်ပြီးပြည့်စုံပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် site ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုဂရုစိုက်စွာပြင်ဆင်နေသည်။၎င်းကိုကျွန်ုပ်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိလူများကအလွန်အမင်းအကဲဖြတ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၌လုပ်စရာများစွာရှိသည်။ ထို့ကြောင့် "Corona ၏လွှမ်းမိုးမှုကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်အလုပ်မရှိကြောင်း" အတွက်စိုးရိမ်စရာမလိုပါ။ ★လှုံ့ဆော်မှုဖြင့်အလုပ်လုပ်သော ၀ န်ထမ်းများအတွက်အချိန်မရွေးလစာတိုးမြှင့်ပေးမည်။သင်၏စွမ်းရည်နှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုပေါ် မူတည်၍ သင်သည်ပိုမိုမြင့်မားသောအဆင့်များကို ဦး တည်နိုင်သည်။ ★အရည်အချင်းပြည့်မှီသောပံ့ပိုးမှုဖြင့်သင်၏စွမ်းရည်နှင့်အလုပ်အမျိုးမျိုးသည်တိုးတက်လိမ့်မည်။အကယ်၍ သင်သည်ထိုစက်ကိုဆိုက်တွင်ရွှေ့လိုပါကသင်အလုပ်လုပ်နေစဉ်အရည်အချင်းပြည့်မှီနိုင်သည်။
Yamato Heavy Machinery Co. , Ltd.အလုပ်များကြည့်ပါ
★ကုမ္ပဏီသို့ဝင်ရောက်ခြင်းအတွက်ယန်းငွေ ၃၀၀၀၀ ★။ (စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများရှိပါသည်) ★အဆောင်သည်အပြည့်အဝတပ်ဆင်ထားပြီးသင်အဆောင်သို့ချက်ချင်းဝင်နိုင်သည်။ ★မိုဘိုင်းဖုန်းထောက်ပံ့ပေးထားသည်။ သင်ချက်ချင်းအလုပ်လုပ်နိုင်သောပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြင်ဆင်နေသည်။
မိုးသည်းထန်စွာစက်ယန္တရားစစ်ဆင်ရေး၏အရေးပေါ်စုဆောင်းမှု!သင့်ရဲ့လှုံ့ဆော်မှုပေါ်မူတည်။ သင်၏လစာတိုးမြှင့်!အပြည့်အဝတပ်ဆင်ထားပြီးအဆောင်! သူတို့ရဲ့ 40 နှင့် 50 အတွက်တက်ကြွ!သက်ကြီးရွယ်အိုများကိုကြိုဆိုပါတယ်
အဆောင်ပြည့်စုံ!ဝေးဝေးကလူများအတွက်အဆင်ပြေပါတယ်! သူတို့ရဲ့ 40 နှင့် 50 အတွက်တက်ကြွ!အသက်မရှိ
အတွေ့အကြုံမရှိသူတစ် ဦး ၏နေ့စဉ်လစာ ၁၂၀၀၀ မှ ၁၈၀၀၀ ယန်း (စမ်းသပ်ကာလ - ၃ လ၊ နေ့စဉ်လစာယန်း ၁၀၀၀၀ အထက်) အတွေ့အကြုံရှိသောလူတစ်ယောက် ...
Shiroi City, Chiba စီရင်စု
Shirai City, Chiba Prefecture နှင့်တိုကျိုရှိရပ်ကွက် ၂၃ ခု
Sunray ကုမ္ပဏီလီမိတက်　အလုပ်များကြည့်ပါ
[ရရှိနိုင်တဲ့နေ့စဉ်နဲ့အပတ်စဉ်ငွေပေးချေမှုများကိုပျော်ရွှင်ပါစေ။ ] အလုပ်စလုပ်တုန်းကငွေလိုတယ်။ထိုသို့သောအခြေအနေမျိုးတွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအခမဲ့ဆက်သွယ်ပါ။နေ့စဉ်နှင့်အပတ်စဉ်ငွေပေးချေမှုများဖြင့်ငွေကုန်ခန်းခြင်းမှသင့်အားကာကွယ်ပါ။ [ပညာရေးနောက်ခံ၊ အသက်နှင့်အတွေ့အကြုံသည်၎င်းနှင့်လုံးဝမပတ်သက်ပါ။ ] သင်လိုအပ်သမျှ "ငါဒီလိုဖြစ်ချင်တယ်" နှင့် "ငါကြိုးစားချင်တယ်" ဟူသောခံစားမှုဖြစ်သည်။ဒီနှစ်ခုနှင့်အတူမည်သူမဆို OK ကိုပါ!ငါအဆုံးတိုင်အောင်သင်တို့ကိုဂရုစိုက်ပါလိမ့်မယ်! [ဘဝအတွက်ကျွမ်းကျင်မှုများ GET] သင့်တွင်နည်းပညာရှိပါက၎င်းကိုမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုအသုံးပြုနိုင်သည်။သင်သည်သင်၏အိမ်တွင်း၌သင်၏ကျွမ်းကျင်မှု hone အဖြစ်လွတ်လပ်သောဖြစ်လာအဆင်ပြေပါတယ်!
Sekikawa စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းစု, လီမိတက်အလုပ်များကြည့်ပါ